बुटवलको प्रगतिनगरमा जग्गा विवाद, निर्माणाधीन घरमा चलाइयो डोजर
विकाश पराजुली बुटवल, १३ चैत
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा ११ हजार बढी घरधुरसँग लालपुर्जा छैन । तर, यस्ता घर तथा जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । लालपुर्जाविना टोकनको भरमा यसरी जग्गा बिक्री हुँदा प्रगतिनगरमा विवाद पनि हुने गरेको छ ।
व्यक्ति व्यक्तिमा कागजी किनबेच हुने भए पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा यस्तो विवाद आउने गरेको हो । यसरी जग्गा बिक्री गरिदिने टोलकै नेता हुन्छन् ।
टोल समिति सुकुमबासीका लागि ‘मालपोत कार्यालय’ जस्तै छ । यसरी टोल विकास संस्थाकै व्यक्तिहरूले घर, घडेरी बिक्री गर्दा विवाद पनि उत्पन्न हुने गरेको छ ।
२ चैत ०७३ मा रुद्रपुरकी अमृता थापाले प्रगतिगर नयाँ बस्ती सेक्टरको एफ लाइनको १९ नं. जग्गा किनिन् । १० लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनेको उक्त जग्गा अहिले प्रगतिनगर सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थाले आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ ।
अमृतालाई उक्त जग्गा नवप्रगतिशील मूल समितिका अध्यक्ष राजेश बुढाथोकी र प्रगतिनगर नमूना विकास समितिका नरेशकुमार पुनले टोपीसरा दलार्मीबाट खरिद गरिदिएका थिए । तर, सहकारी संस्थाका उपभोक्ताले भने १३ नं. को जग्गा रहेको भन्दै अमृताको निर्माणधीन घरमा डोजर चलाएका छन् ।
उक्त जग्गामा विवाद भएपछि अमृताले सबैतिर हारगुहार गरिरहेकी छन् । अमृताका दाजु कृष्णबहादुर कामुले निर्माणधीन घर भत्काइएकाले जग्गा खरिद गरिदिने नरेशकुमार पुनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
जग्गा किनाउने नरेशकुमार पुन हाल विद्युत सहकारीका पदाधिकारी समेत हुन् । अहिले सोही सहकारीको उपभोक्ताको सक्रियतामा अमृताको घरमा डोजर चलाएका हुन् ।
सहकारीले वर्षौंअघि जग्गा किनेको भए पनि सो जग्गामा अमृताले घर बनाएपछि उपभोक्ताहरूले डोजर लगाएका छन् । डोजरले अमृताको निर्माणाधीन घरको गारो भत्काइदिएको छ ।
सहकारीले आफ्नो जग्गा यथावत हुनुपर्ने र जग्गा किनाउनेले नै अमृतालाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रगतिनगर सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जीतबहादुर मल्लले अमृताले घर बनाउन लागेको जग्गा सहकारीको भएको प्रमाण आफूहरूसँभ भएको भन्दै अमृतालाई जग्गा खरिद गराइदिनेले अमृतालाई न्याय दिनुपर्ने बताए ।
यता प्रगतिनगर एफ सेक्टर टोल विकास संस्थाले ०७४ मा तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर जीसीको नेतृत्वले तयार गरेको अभिलेखमा भने एफको १३ नं. मा पुर्नाकुमारी श्रेष्ठको जग्गा भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा नारायण खड्का, विक्रम दर्लामी, टोपीसरा दर्लामी हुँदै अमृता थापाले खरिद गरेको अभिलेख भेटिन्छ ।
अभिलेखमा ‘ङ’ लाइनको ३० नम्बर विद्युतको जग्गा
७ असोज ०७४ मा कृष्णबहादुर जीसीको नेतृत्वमा प्रगतीनगर एफ सेक्टर टोल विकास संस्थाले अभिलेख तयार ग¥यो । विद्युत सहकारीले आफ्नो जग्गा एफ १३ नं. भएको बताउँदै आएको छ । तर, अभिलेखअनुसार कुनै पनि १३ नम्बर भने विद्युतको जग्गा देखिँदैन । ’ङ’ को ३० नंं १८/४० हातको खाली जग्गा विद्युतको हुन सक्ने टोलका व्यक्तिहरू बताउँछन । विद्युतले दाबी गर्ने १३ नं. जग्गामा कसको, कति हात जग्गा छ, त्यो हेरौं:
विद्युत कार्यालयद्वासा टोलको अभिलेख अस्वीकार
माथि देखाइएको अभिलेख टोल संस्थाले तयार गरेको थियो । तर, यो अभिलेख सहकारीले भने स्वीकार गर्दैन । अध्यक्ष जीतबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘त्यो उनीहरू आफैंले लिएको अभिलेख हो । हाम्रो त अमृताले आफ्नो भनिरहेको जग्गा नै हो । अरुले के अभिलेख बनाए, त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा होइन ।’ अमृताले जग्गा खरिद गर्दा गरिएको तमसुकमा हाल उनले निर्माण गरेको घरमा चौकिल्ला भने मिल्छ । तमसुकमा लेखिएको छ, ‘प्रगतीनगर नयाँ बस्ती ‘ख’ लाइनको पूर्वमा नाम थाहा नभएको, पश्चिममा सडक, उत्तरमा नाम थाहा नभएको र दक्षिणमा उर्मिलादेवी पन्जीयारको घडेरी नं. १९ हो ।’
तमसुकमै लेखेको व्यहोरा सहकारी अध्यक्ष मल्लाई जानाकारी गराउँदा नाम संयोगले मिलेको हुन सक्ने बताउँछन् । जग्गा खरिद गरिदिने नरेशकुमार पुन भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, ०७:१०:००